Oromo News 07.07.21 | KWIT
Guyyaa har’aa irraa jalqabee ogeessi fayyaa waaye coronavirus irrati daatan inni gabaasu akka jijjiirame himan. Nebraska torbaan darbee keessa jijjiirani jiran. Ogeessi akka jedhetti waae coronavirus website irrati torbaan dhuftuu harbaa akka jijjiiran himan.Kana duraa guyyati yeroo baaye jijiirani jiran.
Obboleessa xiqqaa isaa kan ajjeese osoo hin beekin dingata bakka Iowa amusement ride jedhamuti waggaa isaa 16 kan guutedha. David Jaramillo accidnt guyyaa sanbataa bakka RagingRiverride Adventureland irra gahee booda coma irra turee BlankChildren’sHospital kan yaalamu jiru akka tae himan.
Barattoota beekumsa qabaniifi warra Smithdield dalaguu kan irkataniif University gurguddaa lama kan SouthDakotaCounty keessati argamutti scholarship kennuu jirani.
Programni scholarship kan Smithdield foodkun ijoolle kan qualified godhuudha akkasumas hojattoota Smithfield keesati kan argamanii kan kennamu yoo tau University itti kenamus South Dakota fi south Dakota State University akka tae himan.